Bahlabene ngohlelo lweBET lokuba ngabazali
UNOMALANGA “The Flame” Shozi, kulindeleke ukuthi abonakale maduze ohlelweni olungempilo yakhe kwiBET, Isithombe: Instagram
Nqobile Masimula | February 27, 2022
IZITHANDANI uBandile Mbere, noNomalanga Shozi, abalindele ukuzalwa kwendodakazi, bazoba nohlelo oluzosakazwa esiteshini iBET Isithombe: Instagram/BETAfrica
NGEMVA kwamasonto ememezele ngokukhulelwa kwakhe umsakazi weGagasi FM, sekuvele izindaba zokuthi maduze uzoba nohlelo oluzokhonjiswa kwiBET Africa (Chanel 129).
UNomalanga Shozi, obuye aziwe ngelika-The Flame uzoba nohlelo iThe Rents, oluzolandela impilo yakhe yokukhulelwa njengoba elindele ingane yakhe yokuqala.
Baningi abebengazi ukuthi uyise wengane yakhe nguBandile Mbere, oyiwele leMajor Leagues DJ, kwazise ukuthi impilo yakhe yangasese akajwayele ukukhuluma ngayo.
Ekhuluma uNomalanga emcimbini obuhlelwe yisiteshi wokubungaza ukukhulelwa kwakhe (baby shower), uthe ubonga abakwaBET ngokumenzela iphathi.
“Kusazongithatha isikhathi ukujwayela ukuthi yimina lo osezoba ngumama. Lokhu kuyinto ezohlala unomphelo. Akulula kodwa sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi sibe ngabazali abaqotho,” usho kanje.
Useke wavela emidlalweni yakuleli okubalwa iRythm City, iMTV Shuga neminye. Kuyona inkulumo yakhe uveze ngephutha ukuthi ulindele umntwana wentombazane, ngesikhathi ethi “indodakazi yami ijabulile kade ikhahlela”.
Njengoba uNomalanga esezohlaba ikhefu, uhlelo abelwethula iBET Breaks seluthole umethuli omusha. NgoLwesihlanu kumenyezelwe ukuthi uNaledi “Leddy G” Radebe, uzothatha izintambo. UNaledi ongowukuzalwa eKapa, kanti akamusha kwezikaqedisizungu ngoba kukuningi akwenzayo kule ndima.